Mozilla Thunderbird 60 ichave nekarenda (pakupedzisira) | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla iri kugadzirira vhezheni itsva yeMozilla Thunderbird. Iyi vhezheni itsva haizove imwe vhezheni asi vhezheni huru yakafanana neFirefox Quantum mune mukoma wayo mukuru, Mozilla Firefox. Iyi vhezheni inonzi Mozilla Thunderbird 60.
Iyo vhezheni iyo isina shanduko huru muinjini kana musimboti wekushandisa asi ichava nenhau huru neshanduko zvichienzaniswa nedzimwe shanduro. Zvirinani ndozvazvingaitwe mune beta vhezheni iyo ichangobva kuoneka paMozilla yekuvandudza chiteshi.
Sezvo isu tichiti mumusoro, Mozilla Thunderbird 60 inozopedzisira iine karenda nemutengi weemail. Ndinoziva kuti isu tese takashandisa tikashandisa Thunderbird tinogona kuva nekarenda, asi yanga isiri chikamu chevatengi veemail asi plug-in inonzi Mheni iyo yakambopa mukana wekusarudza kuiisa uye mushanduro dzichangoburwa yaiiswa nekutadza, asi yanga isiri chikamu chemutengi. Zvino kwete chete iyo kalendari ichave chikamu chemutengi, asi zvakare ichakwanisa kubatana neiyo mail application, Kukubvumidza iwe kutumira zviitiko, gadzira zviitiko zvinoenderana neemail, nezvimwe ...
Muchikamu chetsamba, Thunderbird 60 inotendera compact iyo IMAP email account uye isu tinogona kuishandisa compactly, kuchengetedza hard disk space. Pachave zvakare ne mbox uye maildir fomati yekushandura chishandiso icho chiri muchikamu chekuyedza asi chiri kupa mhedzisiro uye izvo zvinobvumidza kushandurwa kwemaemail mune aya mafomati.
Thunderbird 60 parizvino iri kusimukira asi isu tinogona kuiisa mukugovera kwedu mahara uye nyore. Kune izvi isu tinongofanirwa kurodha pasi pasuru yeiyo Mozilla repository; unzip uye unomhanya iyo faira inonzi Thunderbird. Izvi zvichaita kuti tive nazvo Mozilla Thunderbird 60 asi haizove iri yega vhezheni yekugovera kwedu, yatinozofanira kumirira kwenguva yakati rebei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Mozilla Thunderbird 60 ichave nekarenda (pakupedzisira)